निखिल उप्रेतीको नजरमा पढ्नैपर्ने तीन पुस्तक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
निखिल उप्रेतीको नजरमा पढ्नैपर्ने तीन पुस्तक
मेरो लाइफस्टाइल || 27 March, 2021
यदि तपाईं शनिवार फुर्सदिलो हुनुहुन्छ भने पुस्तक पढेर पनि समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो खाली समयलाई कस्ता पुस्तक पढेर सदुपयोग गर्ने त ? कस्ता पुस्तक छान्दा राम्रो हुन्छ । यदि यस्तो दुविधामा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यी तीन पुस्तक पढेर विदाको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
(नायक निखिल उप्रेतीको नजरमा पढ्नैपर्ने तीन पुस्तक)
१. शुक्ल यजुर्वेद
म मैले पढेका कुनै पुस्तकमा तीन पुस्तक छान्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा वेदलाई लिन्छु । वेद त्यस्तो पुस्तक हो जो अरुमा छैन, त्यो वेदमा छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा वेदमा सबथोक छ, के चाहिं छैन ? यो नै मेरो उत्तर हो ।
दोस्रोमा मैले नाम लिनुपर्दा अष्टावक्र गीताको लिन्छु । यसमा जीवन के हो भन्नेबारे बुझ्न सकिन्छ । व्यवहार, जीवन र कर्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ ।सारा जीवनका लागि चाहिने कुराहरू यसमा छन् । त्यसैले पनि एकपटक पढ्नैपर्छ ।
यो पुस्तक हर्मन हेसले लेखेका हुन् । पुस्तकले नोवेल शान्ति पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो । यो कितावमा के छ भन्नुपर्दा, यसभित्र दर्शनका कुराहरू धेरै छन् । सामान्य अर्थमा सिद्धार्थ भन्नाले गौतम बुद्धको भन्ने लाग्न सक्छ, तर यसमा त्यो नभएर अन्य कुराहरू धेरै छन् ।